Waaliga Gedo oo booqday Buusaar.(Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Waaliga Gedo oo booqday Buusaar.(Dhagayso)
On Mar 21, 2019 248 0
Waa saldhigii Kenyaatigu ka degnaayeen Buusaar.
Sheekh Cabdi-raxmaan Abuu Muxamed oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee Gedo, iyo mas’uuliyiin kale oo wehlineysay ayaa gaaray deegaanka Buusaar ee gobolkaas, halkaas oo dhawaan ay isaga carareen ciidamada Kenya oo todobo sano kahor la wareegay.
Dadka deegaanka Buusaar ayaa aad usoo dhaweeyay waaliga iyo wafdigiisa, waxaana waaliga uu meel fagaare ah kala hadlay boqollaal ruuxx oo kamid ah dadka deegaanka, kuwaas oo u xiiseynayay la kulanka wilaayada maadama sanado badan isugu dambeysay.
Sheekh Cabdi-raxmaan Abuu Muxamed oo kalimad dhinacyo badan taabaneysay jeediyay ayaa mahadcelin iyo fur furasho kadib, wuxuu ka hadlay xaqiiqda dagaalka ka holcaya Soomaaliya iyo xitaa guud ahaan caalamka, iyo weliba cida uu u dhexeeyo.
Wxuuu waaligu sheegay inaaney waxba ka jirin hadallda ay Shisheeyuhu ku hadaaqaan ee ah iney la dagaallamayaan koox gooni ah, isagoona intaa ku daray in dagaalka uu yahay mid u dhexeeya Masaajidka iyo Kaniisadda.
Isagoo weli hadalkiisa sii wata ayuu Sheekh Cabdi-raxmaan Abuu Muxamed, wuxuu ugu baaqay reer Buusaar iney isgarab taagaan Mujaahidiinta, hubkana qaataan, isagoo intaa ku daray inuu muuqdo jabka Shisheeyaha kusoo duulay Soomaaliya.
Ka wilaayo ahaan, wuxuu waaligu sheegya inaaney aqoonsaneyn deegaannada dhaca xuduud beenaadka ee ay Kenyaatigu xooga ku heystaan, taas bedelkeeda ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah ciidamada Kenya ee ku sugan Giriley iyo meelaha lamidka ah.
Damiciii Kenyatiga ee ahaa iney la wareegaan Jubbooyinka iyo Gedo ayuu Sheekh Abuu Muxamed sheegay inuu fashilmay fadliga Allaah, intaas kadib nafhurka iyo sabarka ciidamada Mujaahidiinta.
Nabadoon Cabdullaahi Al-anasaari oo kamid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee Gedo, kana mid ahaa wafdiga waaliga ayaa isagana ka hadlay fagaaraha ay isugu soo baxeen reer Buusaar, wuxuuna goobta ka jeediyay kalimad qiiro leh oo saameysay dadkii fagaaraha joogay.
Wuxuu sheegay iney doonayaan in shareecada Allaah ay taliso, meeshana ay ka baxdo qabyaaladda iyo waxyaabaha lamidka ah, wuxuuna reer Buusaar u sheegay iney qaateen darsi muhiim ah, maadama ay arkeen tacaamulka ciidamada Kenya, hadana ay la joogaan Mujaahidiinta.
Dhawaan ayay ciidamada Kenya iyo soomaalida la socota waxay isaga carareen deegaanka Buusar oo ahaa deegaanka keliya ee ay Kenyaatigu kaga sugnaayeen gobolka Gedo, waxaana Kenyaatiga u ruqaansadeen dhinaca xuduud beenaadka, iyagoona la kulmay weeraro qaraxyo ah oo u geystay khasaare isuga jira dhimasho iyo dhaawac.
16-kii Octobar, 2011, ayay ciidamada Kenyaatigu kasoo gudbeen xuduud beenaadka, iyagoo markii ugu horeysya gudaha usoo galay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaana xilligaas ay ku andacoodeen in ay sugayaan amaanka dalkooda.
Maantase waxay dadka is weydiinayaan waxay Kenya ka dhaxshey duulaankeeda Soomaaliya oo aan ka ahayn amni darro gudaha ah, ciidankooda oo noqday wax dhintay iyo wax nolosha lagu qabto, halka intii soo hartana iyagoo jabsan ay isaga baxayaan deegaannadii ay horey gardaraada kula wareegeen.
Halkan ka dhagayso Kalimadda waaliga Wilaayada Gedo Sheekh Abuu Muxamad
Halkan ka dhagayso Nabadoon Cabdullaahu Al-ansaari.lite